Factory Factory, mpamatsy - mpanamboatra faritra China
Ny exciter vibration dia mifamatotra amin'ny milina sy fitaovana sasany hiteraka hery manetsika, ampahany lehibe amin'ny fampiasana ny vibration mekanika. Ny exciter vibration dia mety hahatonga ilay zavatra hahazo endrika sy habe amin'ny hovitrovitra, mba hanaovana fitsapana hovitrovitra sy hatanjaka amin'ilay zavatra, na hamehezana ny fitaovana fitsapana hovitrovitra sy ny sensor.
Ny takelaka fanasivanana, fantatra koa amin'ny hoe lovia porous, dia misy fanoherana tsara, fiainana maharitra, fanoherana ny hamandoana ary fanoherana. Izy io dia mety amin'ny fanasana, ny fisavana, ny naoty, ny fanimbana, ny fanafoanana ny asa, ny fihenan-drano ary ny indostrian'ny mekanika hafa.
Ny andiana poloka eccentric azo ovaina dia apetraka amin'ny tendrony roa amin'ny vatan'ny rotor, ary ny hery mampientanentana dia azo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hery centrifugal vokarin'ny fihodinan'ny haingam-pandeha sy ny sakana eccentric. Ny halehiben'ny fihodinan'ny motera dia mihetsika lehibe, ary ny feon'ny mekanika dia azo ahena raha tsy mifanaraka tsara ny hery mampientanentana sy ny heriny.